I-CrankWheel: Ukuhlela i-Bypass nokulanda Ngamademo Asekelwe Esipheqululini Esisheshayo Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 16, i-2021 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 16, i-2021 Douglas Karr
Konke ukuxhumana okudingekayo phakathi kwethemba ngenhloso yokuthenga namandla weqembu lakho lokuthengisa ukubasiza baguquke kungenzeka kunciphise amathuba okuguqulwa. Lokho kufaka isikhathi sokuphendula, inani lokuchofozwa, inani lezikrini, inani lezinto zefomu… konke.
Ochwepheshe bezentengiso engibaziyo bafuna nje ukufika phambi kwethemba. Bayazi ukuthi uma nje bekwazi ukukhuluma nalokho okulindelwe, bakhombe inkinga yabo, bese babahamba ngesisombululo… maningi amathuba okuthi babaguqulele kukhasimende.
Izinkampani eziningi zenza lokho okuhlangenwe nakho kubi, noma kunjalo. Sibenza bagcwalise amafomu okuthola iziqu zangaphambi kwesikhathi, sibenza bacele imininingwane, sibabekele isikhathi sabo sokuqokwa… bese siyamangala ukuthi ikhono lethu lokuthola umkhondo ofanelekayo emnyangweni wethu wokuthengisa linezinga elibi kakhulu lokuguqulwa.
Amademo we-CrankWheel Instant
Kuthiwani uma, ngensimu eyodwa, ungakwazi ukuhambisa ngokushesha isicelo sethemba kwilungu leqembu elivulekile lokuthengisa? Umane ucele inombolo yabo yocingo, ilungu leqembu lokuthengisa liyabahlanganyela… futhi ngaphandle kokulandwa kwesoftware noma izinyathelo ezingeziwe… bangaqala ukukhombisa umkhiqizo noma insiza yakho?
Amademo we-CrankWheel Instant leso yisixazululo. Abaholi bezentengiso emhlabeni wonke basebenzisa iCrankWheel ukwaba ngokushesha isikrini sabo namathemba - akukho ukulanda okudingekayo. Usebenzisa i-Chrome Extension yabo, ithimba lakho lokuthengisa lingakhombisa ukulindela kwakho isikrini sakho kunoma iyiphi idivayisi yeselula noma kudeskithophu ngemizuzwana engaphansi kwengu-10.
Hhayi lokho kuphela, ngoba babelana ngenombolo yabo yocingo… ICrankWheel nayo izama ukukhomba futhi ibuyise imininingwane ebucayi ethembeni lokuthi ukwazi ukuqala kahle ukuqonda ukuthi bangobani, inkampani yabo, nokuthi kungenzeka yini noma cha ufanelekele ukuhola.
Ngesikhathi semihlangano yami yansuku zonke enamathemba, ngisebenzisa iCrankWheel ukwethula insiza yethu yewebhu. Kuyangisiza impela ukukhombisa izici ngokushesha futhi ngaphandle kokufaka noma yiluphi uhlelo kukhompyutha yalowo okulindeleke ukuthi abe khona.
UQuentin Roquet, isikhulu esiphezulu seProgenda
Izici ze-CrankWheel nezinzuzo
Abasebenzisi beCrankWheel bayabona ukwanda okungu-22x kwesibalo samademo bayakwazi ukuqala ukubonga kumaDemos asheshayo.
Ukubanjwa kokuhola kwengxoxo - Thola imikhondo eminingi ngenxa yamafomu wokuxoxa ngokwezifiso ongawabeka kuwebhusayithi yakho noma kumikhankaso ye-imeyili. Yazisa ngokushesha abathengisi mayelana namathemba aku-inthanethi alinde ucingo, esikrinini, nangomyalezo wombhalo.
Ukucebisa komholi - Lisebenzise ngokunenzuzo imininingwane yokuthintana ngokulinothisa ngolwazi olufanele njengendawo, inkampani, izixhumanisi zomphakathi njll. Dala amarekhodi e-CRM agcwele futhi wazi okuningi ngokuhola kwakho.
Ukuhlanganisa - Imikhondo yeMpendulo ekhiqizwa yiwebhusayithi ngokushesha ngaphandle kokuhlanganisa izinhlelo zokusebenza eziningi zokunika amandla ukuthengisa. Ngeza kalula i-a Ngifonele manje or Cela i-Demo inkinobho kuwebhusayithi yakho. Ukuhola kungangena ngqo ku-CRM yakho noma kwezinye izinhlelo kusetshenziswa okunye kokuhlanganiswa okutholakalayo okuningi.
Dala i-Akhawunti yeDemo esheshayo ye-CrankWheel
Ukuhamba-Ngokuhamba Kwamademo Ase-CrankWheel Instant
Nayi ividiyo yokubuka konke yesixazululo esivela kokuhlangenwe nakho komsebenzisi okulindelekile kanye nesipiliyoni selungu leqembu lokuthengisa. Kuhle kabi!
Ukudalulwa: Ngixhumene ne I-CrankWisithende.
Tags: shayela manjeisandiso se-chromeisondoamademoni osheshayo we-crankwheelCRMi-Google Chromeamademo osheshayoukuthuthukisa ukuholacela i-demoidatha yokuthengisaukwaba isikrini